The Ab Presents Nepal » कतार विरूद्ध नेपाललाई ठूलाे झट्का ! खेलाची खेल
कतार विरूद्ध नेपाललाई ठूलाे झट्का ! खेलाची खेल
काठमाडौं, ७ साउन -: कतार विरूद्धकाे खेलमा नेपाललाई तेस्राे झट्का लागेकाे छ । तेस्राे विकेट रूपमा सरद भेषवाकर आउट भएका छन् । १२ बलमा ७ रन मात्रै जाेडेका छन् । दाेस्राे विकेटकाे रूपमा ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएका थिए । २४ बलमा २३ रन बनाएर आउट भएका हुन् । पहिलाे विकेटकाे रूपमा पारस खड्का आउट भएका थिए । उनले ४ चाैका १ छक्का प्रहार गर्दै १७ बलमा मा २८ रन जाेडर आउट भएका हुन् ।
सिंगापुरमा जारी आइसीसी टी–२० विश्वकप एसिया फाइनल छनोट अन्तर्गत कतार विरुद्धको खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण पिचमा समस्या देखिएपछि खेल ढिला सुरु हुन पुगेको हो । ११ ओभरमा ६८ रन जाेडेकाे छ ।
यस्तो छ नेपालको प्लेइङ–११ः पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, अभिनास बोहरा, सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, करण केसी र ललित नारायण राजवंशी । हिटर खेलाडी राेहित कुमार पाैडलले भने यस खेलमा छैनन् ‘।